Xafiiska caafimaadka DDSI ayaa sheegay in baadhitaan dhinaca indhaha ah lagu samayndoono 7000 oo qof halka qaliin indhaha ahna lagu samayndoona 500 oo qof. - Cakaara News
Xafiiska caafimaadka DDSI ayaa sheegay in baadhitaan dhinaca indhaha ah lagu samayndoono 7000 oo qof halka qaliin indhaha ahna lagu samayndoona 500 oo qof.
Waxaa jigjiga(CN) Isniin Feb02-2015.maanta siwayn uga socday dhakhtarka wayn ee dhaaraamardha baadhitaan dhinaca indhaha ah oo ay fulinayso hayada almasaari international oo ah haay’ad ku takhasustay qaliinka iyo daawaynta dhinaca dhinacaha.
Waxayna masuuliyiinta xafiiska iyo xukuumaduba ku guulaysteen in ay haayadan keenaan deegaanka si ay qaliin iyo daawayn dhinaca indhaha ah uga fuliso deegaanka taasi oo si bilaash ah indhaha loogu qalayo bulshada looguna daawaynayo. Haddaba si aan xogdheeriya uga helno daawayntan iyo qaliinka dhinaca indhaha ayaa waxaa noo suurta gashay in aan xafiiskiisa ku booqano wasiir ku xigeenka ahna ku simaha wasiirka xafiiska caafimaadka mudane cumar maxamed.
Wuxuuna noo sheegay in dadaalada horumarineed ee ay xukuumadu ugu jirto dabaalida iyo ka jawaabida baahida deg dega ah ee shacabka deegaanka ay hirgalisay in siwayn loogu guulaysto adeegsiinta bulshada.
Isaga oo ku simaha wasiirku hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in hayadan maanta ka bilowday qaliinka dhinaca indhaha iyo waawaynta ay tahay mid heer caalamiya oo la yidhaahdo almasari international ku xeel dheer dhinaca qaliinka indhaha iyo daawayntooda isaga oo sheegay in ay xukuumada iyo xafiiskuba ugu jiraan dadaalo balaadhan sidii bulshada deegaanka looga xaqab tirilahaa adeega dhinaca caafimaadka oo hufan horena loogu sameeyay bulshada deegaanka qaliimo iyo daawayn dhinaca indhaha ah oo laga fuliyay gobolada deegaanka iyo degmooyinkaba. Waxayna tani ka mid tahay ayuu yidhi wasiirku mid lagu soo xoojinayo adeeg siinta bulshada ee dhinaca daawaynta iyo qaliinka dhinaca indhaha ah.
sidoo kale waxa uu sheegay dr cumar in ay muddo totobaad ah ay ka shaqayndoonaan dhakhaatiirtani dhakhtarka wayn ee kaaraamadhka kuwaasi oo ka fulin doona qaliinka dhinaca indhaha ah oo dhan 500 oo qof halka baadhitaan iyo daawayn lagu samayndoona in ka badan 7000 oo qof